Sawirro: Gurmad la gaarsiiyay Boqolaal qoys oo fataahaadu ku saamaysay duleedka Kismaayo. – Bogga Calamada.com
Sawirro: Gurmad la gaarsiiyay Boqolaal qoys oo fataahaadu ku saamaysay duleedka Kismaayo.
Hay’adda Al-ixsaan ee khayriga ah iyo gudida gurmadka fataahadda wilaayada Jubbooyinka ayaa si wada jir ah gurmad u gaarsiiyay in ka badan 300 oo qoys oo ku saamoobay fatahaadda wabiga jubba, kuwaasi oo deegaanadoodu ku dhowyihiin meelaha cadowgu fadhiyo ee duleedka Kismaayo.
Tuulooyinka sida ba’an fatahaadu u saamaysay ee gurmadka la gaarsiiyay waxa ka mid ah Sanguuni, Araare, Sangaleyr, Jiibay, Baarka iyo Towfiiq, raashinka dadka loo qaybiyayna waxaa ka mid ahaa: Bariis, sonkor, saliid iyo maro kaneeco.
Sidoo kale waxa jiray dad boqolaal qof kor u dhaafay oo loo sameeyay baaritaan caafimaad, daawooyin bilaash ahna la siiyay
Si kastaba ha ahaatee hay’adda Al-ixsaan oo ah hay’adda kaliya ee wilaayaadka Islaamiga ah ka shaqaysa iyo gudida gurmadka oo is kaashanaya ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda ay gaaraan tuulooyin kale oo si aad ah gurmad ugu baahan.
Masha Allah si fcn udadala xadafkina ayaa gari dontaan in sha Allah